The Apple Watch haina kugadzirira kuita dzevamwe iPhone wako izvozvi, asi achangobuda mienzaniso kuita chinhu chakaipisisa chikamu zvose oga: uye makuru unokwanisa kusiya iPhone yako kumba. Read this article which includes complete information about How to Use Apple Watch Without Pairing to iPhone.
wanda Apple Watch mafomu vari zvikuru chete kuratidzwa zvinhu wakamhanyira iPhone wako, uye dzimwe pfungwa dzinokosha havasi nyore ari kubvisa mukana kuti urege vachiwirirana kuti iOS Gadget.
Ivai kuti hazvo, chii Watch wako kuita rinovimba pamusoro izvo chaizvo muenzaniso une. Semuyenzaniso, wokutanga Watch haana GPS nomuteresi, saka kana foni yako haisi kumativi haugoni kutevera kuparadzana waita waenda kare kupima matanho. Pasi tozotaura iwe kuburikidza chii Watch wako anogona kuita.
wps wpa muedzo wepc
1 Sei Use Apple Watch pasina Pairing iPhone
1.1 Chamber Run Your
1.2 Track swims zvenyu
1.3 Update mafomu zvenyu
1.4 Pay nokuti Stuff
1.5 Get pamusoro ndege kana kubuda kuona mafirimu
1.6 Kuteerera mumhanzi, Audiobooks kana Podcasts
1.7 Chamber Fitness wako uye Health wako
2.1 Zvakawanda kubva pasiti yangu
Sei Use Apple Watch pasina Pairing iPhone
Chamber Run Your
On the kubvisa mukana kuti uine GPS-kwakaita Apple Watch (mudungwe 2 Kuvira) unogona kutevedzera ako Zara vasingadyi runhare yako iwe, uye tichiyeuka kuti haugoni vanodirana Apple Music ari non-Cellular mienzaniso unogona kutevedzera mimhanzi wachi yako kuzvinzwa panze pamusoro Makaralı earbuds paunenge kumhanya.
Track swims zvenyu
Ino kwomunhu sasvikika kuna Series 1 varidzi, tiri kushuvira: Watch haana kuwana mvura nemishonga kusvikira Series 2, izvo Anopa iwe kupfeka nayo apo kushambira iwe.
Apple pachake dzinoshambira vanotevera zviri zvishoma zvikuru, asi kune hombe yakawanda munhuwo chikumbira huenderane mumwe chinodiwa.
Update mafomu zvenyu
Original Apple Watch mafomu vakanga zvikuru chete kuratidzwa: kushanda zvechokwadi akaita zvose basa rayo pamusoro iPhone wako uye Watch anongoti akaratidza kwauri zvaitika.
Kuti zvakachinja watchOS 2, izvo akapa mafomu vemo: kuti ndiye, mafomu chaizvoizvo akamhanyira pamusoro Apple Watch.
All Apple Watches achimhanya watchOS 2 kana pashure anogona kuva mafomu anozorodza achishandisa Wi-Fi, uye dzimwe dzacho dzinogona Saizvozvowo kuwana achishandisa foni kuronga pamusoro GPS + Cellular Modèles.
Pay nokuti Stuff
Kana maita akamisa Apple Pay pamusoro iPhone raMwari Watch kunyoresa, unogona kubhadhara zvinhu pasina kutarisira kuti iPhone wako anobatsira. Kuti uri nhandare kuti chikumbiro anoita chiratidzo kunoshamisa akarambwa Makarinda yokushandisa sechiratidzo kadhi nhamba – kubvumira kuti kushandisa Apple Pay chero chiitiko, kana uri kure runhare yako.
Kubhadhara, kumboda kuzunguzira wachi chako Apple Pay-hwakakwana chinouraya uye regai zvizere NFC (Near munda kutaurirana) redhiyo kuita chinhu chacho.
Get pamusoro ndege kana kubuda kuona mafirimu
Apple Wallet riri Apple Watch, saka chinhu kare kubvisa mairi – ndege matikiti, zvemagetsi matikiti uye chero mumwe verengeka – vanofanira kushanda akanaka uye dandy pasina iPhone wako.
Zvinosuruvarisa, kwete masangano vose Ndanzwisisa izvi, saka tichiri kugara meandering kumativi pamwe muhomwe uye satchels dzakatakura chikweshe, zvisinei, tiri kuchengeta zvinhu zvakawanda kuenda nekombiyuta.
Kuteerera mumhanzi, Audiobooks kana Podcasts
The Watch ine yayo okuchengetera, mamwe chiri nyore kuti mumhanzi – saka unogona kushandisa pakuvara Makaralı kuti hangaiwa aine vaviri kure earphones uye kuwana mumhanzi kubvongodzwa weWatch raMwari.
Kazhinji Hauzovi kusarudza kudirana mumhanzi chero akatodzana Spotify kana Apple Music pasina sero muenzaniso, asi pane zvose zvaigoneka chaizodiwa mukati kuunganidza kuti run, chiitwa kana pfupi nemotokari. Kana iwe uri utilizing Apple Music unogona kuita Playlists svikika vasingadiwi ako Apple Watch.
Vamwe mweni zvikumbiro anogona saizvozvo uyewo ichi, Semuyenzaniso, Anzwike saka unogona kuchengeta bhuku rako zvakarekodhwa pamusoro chiningoningo yako.
Chamber Fitness wako uye Health wako
The Apple Watch hakudi peya pamwe iPhone wako dzokuongorora kupomba yako kana muviri: rinogona kuchengeta mashoko uye synchronize kuna Health chikumbiro kana wadzokera kuna run yako, kutenderera kana kwavaizoenda kuti rec centre. Kune saizvozvo akasiyana munhuwo Wellness zvikumbiro pindika, Semuyenzaniso, chikafu.
The Series 4 mhando tora zvinhu yekudyidzana mberi mimwe dzakabudirira kupomba inotevera uye kunyange nokuwa nzvimbo, izvo Sero mienzaniso vanogona kushandisa vanyevere yacho yakakodzera vanhu vari chiitiko kuti uine inotyisa kuwa.
Verenga nyaya ino zvinosanganisira mashoko zvakakwana pamusoro Sei Use Apple Watch Pasina Pairing kuna iPhone. Pano muchawana zvose zvakasiyana mabasa unogona kuita kushandisa kwako Apple Watch pasina aiwanzopiwa wokushanda kuna iPhone.
ApowerPDF YePC Windows 10/8/8.1/7 - Dhawunirodha Dzazvino Shanduro
ShareMe for PC (2021) – Kurodha mahara maWindows 10/8/7
Download Snapchat for PC (Windows 10, 8,8.1,7) Mahara
Siya Revo kukanzura mhinduro
zita Email Website